Nhọrọ Ntuziaka Ihe - Createpoto - Createproto Tech Co., Ltd.
Nchịkọta / Nhọrọ Nhọrọ Ihe
Nke a bụ ndepụta nduzi maka nhọrọ ihe, ọ nwere nkọwa, njirimara, ngwa na usoro ndị ọzọ dị ka n'okpuru, ị nwere ike ịlele ya maka nkọwa niile wee họrọ ihe ndị kwesịrị ekwesị.
Nkọwa: Igwe ihe eji arụ ọrụ dị ọnụ ala na-enye ahụkebe na ike dị elu maka ọtụtụ akụkụ eji arụ ọrụ dị elu.
Njirimara: Pne nke nkịtị Prototype CNC machining ihe, Mfe machined, thermoformed na okpomọkụ-guzobere, ABS nwekwara ike na-ese na glued maka kwukwara egosipụta. Magburu onwe kwes na akụkụ kwụsie ike mụbaa ya machinability tupu mmepụta ABS machining prototypes.
Ngwa: General Ezinaụlọ ihe, ysmụaka, Automotive Parts, kichin Ngwa, Computer Parts, Laboratory Equipment, Ekwentị / Faksị igwe akụkụ, Ọdụdọ / Electronic enclosures, craftgbọ elu na automotive n'ime ụlọ trims
Emecha Dị: Igwe Na-emecha, Nzucha Nchacha, Blast Sand, Nchachachachacha, Agba ma ọ bụ Gray Primary, Electroplated
Kwuru, sị: Natural akụrụngwa dị na ude White agba. Nnukwu na akụkụ dị mgbagwoju anya na okpuru nwere ike ịme ngwa ngwa na ngalaba na glued. Ego nhọrọ maka prototype CNC machining.
Ajọ: Adabaghị maka mmanụ dabere na mmanụ, agba na ihe mgbaze. Okpomoku di oke mmiri, mmiri na mmiri oku, iguzogide igwe. Nwere ike ọkọ. Omalu oku na elu anwuru oku.
Pdị iheProto: ABS - Eke ABS - Nwa ABS - UL-94V0 na-enwusi ọkụ
Njupụta (g / cm³): 1.06
Mmiri Mmiri (%): 0.25
Ike ọdụdọ (Mpa): 38
Nsogbu Mgbanwe (MPa): 2100
Mgbatị na ezumike (%): 35
Izod Ike Ike Achọpụtara (J / m): 300
Ike Mgbanwe (MPa): 65
Mgbanwe Flexural (MPa): 200
Okpomoku Na-agbapu Okpomọkụ - 0.46MPa ©: 98
Okpomoku Na-ekpuchi Okpomọkụ - 1.8MPa ©: 94
Nkọwapụta: PolyCarbonate a na-ejupụta (PC) bụ ihe siri ike na nke na-adịgide adịgide, na-ahụ maka nkà na ụzụ thermoplastic a ma ama maka nrụgide dị elu ya, nguzogide okpomọkụ na ngwa anya.
Njirimara: Nguzogide Nnukwu Mmetụta, Ezi Nkwụsi Ike Dị Ike, Njide ike magburu onwe ya na okpomọkụ dị elu, ọnụọgụ dị ala nke mgbasawanye ọkụ, Ezi Nkwụsi Ike. Ezi eletriki insulator na-enwe Okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ na ire ọkụ retardant Njirimara.
Ngwa: Anya mkpuchi akpaka na Ọta nchekwa, Ngwa ahụike / Ahụike, Ngwa Automotive, Constructionlọ Ọrụ Mwube, Ngwongwo Sporting, Ngwa, Casing na housings, Eletriki / Elektrọnik, Njikọ, Kọmpat Disks, Telecommunication Hardware
Emecha Dị: Igwe Na-emecha, Nzucha Dị nro, Sand Blast, Mirror Polish, Vapor Polish, Translucent finish (Foggy dị ka oriọna Oriọna), Na-ese ma ọ bụ Grey Primered
Kwuru: A na akụkụ nwere translucent anya mgbe prototype CNC machining ma nghọta nwere ike nweta site ukwuu polishing. Ọ bụ ike, nkwụsi ike, nkwụsi ike na nghọta na-eme ka ọ bụrụ ezigbo ihe maka ụfọdụ usoro arụmọrụ. Enwere ike ime akụkụ buru ibu ma dị mgbagwoju anya na okpuru ala na ngalaba ma glued.
Ajọ: N'okpuru ịdọ aka na ntị n'ihi nrụgide, Nguzogide na-eguzogide ọgwụ na-adịghị mma, Nkpuchi nkwụsịtụ dị ala.
Pdị iheProto: PC - Kọwaa PC - Black PC 20% GF - Black
Njupụta (g / cm³): 1.2
Mmiri mmiri (%): 0.15
Ike ọdụdọ (Mpa): 64
Nsogbu Tenisle (MPa): 2200
Mgbatị na ezumike (%): 75
Ike Izod achọpụtara (J / m): 750
Ike Mgbanwe (MPa): 95
Mgbanwe Flexural (MPa): 2300
Okpomoku na-ekpuchi Okpomọkụ - 0.46MPa ©: 138
Okpomoku Na-ekpuchi Okpomọkụ - 1.8MPa ©: 130
Nkọwa: Nke a makwaara dị ka PMMA (PolyMethyl-MetaAcrylate) bụ ihe amorphous nke na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma. A na-ejikarị Acrylic eme ihe dị ka iko dochie. Acryli
Njirimara: Ngosiputa nma anya di nma, Nguzogide Abrasion di nma, ezigbo nguzo gburugburu ebe obibi, Ezi Nsogbu Okpomọkụ, Ezi Nguzogide Chemical. Enwere ike ire ọkụ ma ọ bụ obere anwụrụ ọkụ.
Ngwa: Akụrụngwa ọkụ, Mkpanaka ọkụ, Ọcha doro anya na akpa akwa, Lens, Shop-fittings, craftgbọ elu ụgbọ elu, Ihe ngosi ọhụụ, Ihe ịrịba ama, Ngwa, Ngwa ụlọ ọgbara ọhụrụ, Ihe ịchọ mma, Ahụike / Ahụike. PMMA nwere ezigbo ogo ndakọrịta na anụ ahụ mmadụ.
Emecha Dị: Igwe Na-emecha, Nzucha Dị nro, Mirror Polish, Polish Flame, Translucent Finish, Na-ese ma ọ bụ na-achacha agba
Ntughari: PMMA bụ otu n'ime CNC CNC machining Material ọzọ na Polycarbonate (PC) mgbe oke ike adịghị mkpa. Ahịa aha njirimara nke Acrylic gụnyere Plexiglas, Lucite na Perspex. Akụkụ buru ibu ma sie ike nwere ike ịrapagidesi ike.
Ajọ: Mmetụta na-adịghị mma na-emetụta, Na-adabere na nrụgide nrụgide, Adabara maka ojiji na chlorinated ma ọ bụ aromatic hydrocarbons. Ihe okike, PMMA na-aza ma na-agbaze n'ọtụtụ ihe ndị na-emepụta ihe.
Pdị ihe eji emeProto: PMMA - Clear PMMA - Black
Njupụta (g / cm³): 1.18
Mmiri mmiri (%): 0.4
Ike ọdụdọ (Mpa): 70
Mgbanwe Tensile (MPa): 2800
Mgbatị na ezumike (%): 10
Izod Ike Ike Achọpụtara (J / m): 22
Ike Mgbanwe (MPa): 96
Mgbanwe Flexural (MPa): 3200
Okpomoku Na-ekpuchi Okpomọkụ - 0.46MPa ©: 110
Okpomọkụ Na-ekpuchi Ọkụ - 1.8MPa ©: 95
Acetal a makwaara dị ka POM (PolyOxyMethylene) bụ injinịa Thermoplastic a na-ejikarị eme ihe maka nkenke ihe dị mkpa nke na-achọ isi ike, esemokwu dị ala na nkwụsi ike akụkụ.
Njirimara: Ezigbo abrasion na-eguzogide ọgwụ Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, na-egbukepụ egbukepụ, ọmarịcha njigide Onwe-mmanu dị mma, ike & isi ike. Nnukwu mmiri na-eguzogide ọgwụ (gụnyere ọtụtụ ihe mgbaze). Ezigbo ọkụ eletrik na Dielectric.
Ngwa: Kwadobe, Biarin, kposara, mgbapụta akụkụ, Electronic mmiri, Insulators, Medical akụkụ, Ngwá ụlọ ngwaike, valvụ ozu, Zippers, Mmiri n'okpuru osimiri ngwa.
Emecha Odi: Nzuzo igwe, Ezigbo imecha, Blast Sand, Nchachachacha
Kwuru: Ọ dị mfe iji igwe rụọ ọrụ mana o siri ike ijikọ. Ezi mma na gloss imecha. Acetals na-asọ mpi na Nylons ọtụtụ maka otu ngwa ahụ mana ọ na-akwụsi ike karịa naịlọn n'okpuru ọnọdụ mmiri na iru mmiri.
Ajọ: O siri ike ijikọta, Nguzogide na-adịghị mma na acid, nke nwere ike iwe ọkụ na nnukwu ike ndọda. O siri ike ite. Akụkụ buru ibu na nke dị larịị nke nwere akụkụ mgbidi na-adịghị agbanwe agbanwe na-adị mfe ịlụ ọgụ.
Pdị ihe dị iche icheProto: Acetal - Natural (White) Acetal - Black
Njupụta (g / cm³): 1.41
Mmiri mmiri (%): 0.27
Ike ọdụdọ (Mpa): 67
Nsogbu Mgbanwe (MPa): 2900
Mgbatị na ezumike (%): 40
Izod Ike Ike Achọpụtara (J / m): 100
Ike Mgbanwe (MPa): 87
Mgbanwe Flexural (MPa): 2900
Okpomoku na-ekpuchi Okpomọkụ - 0.46MPa ©: 165
Okpomoku Na-ekpuchi Okpomọkụ - 1.8MPa ©: 125
Nylon bụ aha ọnụọgụ maka ezinụlọ nke polymer sịntetik mara amara dịka PA PolyAmides. Nylons (Polyamides) nwere ezinụlọ kachasị ukwuu nke plastik injinia nwere ọtụtụ ngwa. Naịlọn na-adịkarị ike, sie ike ma na-eguzogide ọgwụ.
Njirimara: Nguzogide abrasion dị mma, Elongation dị elu, Ezigbo iguzogide mmanụ, mmanụ na ihe mgbaze ma emetụta acid na ntọala siri ike. Good Siri Ike, High Tensile Ike, High Mmetụta Nguzogide, Ezi Dimensional Stability.
Ngwa: Ezigbo maka ngwa ejiji dịka Bearings na Gears, Sporting Goods, Fishing line, Automotive Parts, Tanks, Engineering Parts, Power Tools, Intake Manifolds.
Emecha Dị: Igwe Na-emecha, Na-emecha Ezigbo, Sand Blast.
Ntughari: A na-ejikarị akpa nri na textiles, ụgbọ ala, kapeeti na uwe egwuregwu n'ihi oke ike na ike ha. Naịlọn nwere mma iyi-eguzogide karịa Acetal, ma enweghị ezigbo mmiri na-eguzogide nke na-eme ka ọ ghara ịdị mma ka elu-iru mmiri.
Ajọ: Nnukwu ume mmiri dị elu na-agbada eletriki na igwe. Mwakpo siri ike wakporo, Bases, Oxidizing agents. Nnukwu ọkwa uche.
Createdị ihe ndị dị ndụ: Naịlọn 6/6 - Natural (White) Naịlọn 6/6 30% GF - Black
Njupụta (g / cm³): 1.14
Mmiri mmiri (%): 1.9
Ike ọdụdọ (Mpa): 75
Nsogbu Tenisle (MPa): 2300
Mgbatị na ezumike (%): 90
Ike Mgbanwe (MPa): 80
Mgbanwe Flexural (MPa): 3000
Okpomoku Na-ekpuchi Okpomọkụ - 0.46MPa ©: 200
Okpomọkụ Na-ekpuchi Ọkụ - 1.8MPa a: 90
Nkọwa: PolyPropylene bụ thermoplastic nke na-enweghị ike iji ọtụtụ ebe rụọ ọrụ. Polypropylene nwere ezigbo iguzogide ike ọgwụgwụ. PP na-enye ngwakọta nke anụ ahụ, kemịkalụ, igwe, ọkụ na eletriki.
Njirimara: Ezigbo iguzogide ike ọgwụgwụ. Fechaa na ezi Nchikota ike na mgbanwe. Na-eguzogide ọtụtụ alkaline na Acids. Mmiri obere mmiri na-adịghị egbu egbu. Ezi Mmetụta Mgbochi. Na-ejigide isi ike na mgbanwe.
Ngwa: liancelọ ihe eji arụ ọrụ, nkwakọ nri, ọgwụ na ụlọ nyocha n'ihi na ọ nwere ike iguzogide okpomọkụ na autoclave, mgbapụta mgbapụta, Casings na Livinging Hinges, Akụrụngwa akụrụngwa, akpa nri, ngwa ngwa ọrụ, Igwe okwu mkpọpụta, Ngwa ụlọ.
Kwuru: Polypropylene bụ otu n'ime plastik dị mfe dị. Mfe igwe na-enye ire ụtọ imecha. Ebe ọ bụ na eyi na-eguzogide ike ọgwụgwụ, na-eme ka ọ dabara maka ọtụtụ akụkụ plastik na-ebi ndụ, dị ka okpu karama karama.
Ajọ: O siri ike ịkọwa. Ebibi ihe site na radieshon UV, ihe ndị na-emepụta chlorinated na aromatics wakporo. Nnukwu na mkpa mgbidi sectioned akụkụ na-ewekarị deformation ma ọ bụ warpage mgbe machining.
Pdị iheProto: PP - Natural PP - Black PC 20% GF - Black
Njupụta (g / cm³): 0.9
Mmiri mmiri (%): 0.03
Ike ọdụdọ (Mpa): 33
Nsogbu Mgbanwe (MPa): 1300
Mgbatị na ezumike (%): 185
Ike Izod nwere ike izere (J / m): 60
Ike Mgbanwe (MPa): 45
Mgbanwe Flexural (MPa): 1550
Okpomoku Na-agbapu Okpomọkụ - 0.46MPa ©: 100
Okpomoku Na-ekpuchi Okpomọkụ - 1.8MPa ©: 50
Nkọwa: Aluminom bụ nke a na-ejikarị eme ihe na-abụghị ígwè. Aluminom bụ ihe dị nro, nke na-adịgide adịgide, nke dị fechaa, Ductile na Malleable metal nwere ọdịdị sitere na Silvery to Dull Gray, dabere na njigide elu. Aluminom na -emepụta ihe mkpuchi mkpuchi oxide ma na-eguzogide ọgwụ.
Njirimara: Aluminom bụ ezigbo onye na-ekpo ọkụ na ọkụ eletrik, Ezigbo nguzogide Corrosion, Na-enweghị Magnet na Na-enweghị Ọkụ. Aluminom bụ 100% recyclable enweghị ọnwụ ọ bụla nke àgwà ya. Aluminom bụ ezigbo ngosiputa nke ìhè na Okpomọkụ.
Ngwa: Onu ogugu di iche iche maka ugboala, ugbo elu, gwongworo. Nkwakọ ngwaahịa dịka ihe ọverageụverageụ ihe ọverageụverageụ, mmiri. Industrylọ ọrụ na-ewu ihe owuwu, akụrụngwa dịgasị iche iche, Elektrọnik ndị ahịa, okpomoku ọkụ maka ngwa eletrọniki.
Emecha Odi: Nzuzo igwe, Nchacha achacha, Polish na-enwu enyo, nchachacha nchacha, Bead Blast (Iji nye Matt Mattured finish), Anodising, Painting, Powder Coating.
Kwuru: Aluminom bụ igwe dị nfe nwere oke dị 2.7 g / cm3, ihe dịka atọ nke ígwè. Anyị na-eji Aluminom 6061 na Aluminom 5083 akara ule maka ụdị CNC machining.
Ajọ: Aluminom bụ igwe dị nfe nwere oke dị 2.7 g / cm3, ihe dịka atọ nke ígwè. Anyị na-eji Aluminom 6061 na Aluminom 5083 akara ule maka ịkpụzi.
Pdị ihe eji eme ihe: Aluminium 6061 Aluminom 6061-T6 Aluminom 7075
Njupụta (g / cm³): 2.7
Mmiri mmiri (%) __
Ike ọdụdọ (Mpa) __
Nsogbu Tenisle (MPa) __
Mgbatị na ezumike (%) __
Ike Izod enwere ike (J / m) __
Ike Mgbanwe (MPa) __
Mgbanwe Agbanwe (MPa) __
Okpomọkụ na-ewepu okpomọkụ - 0.46MPa © __
Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services, Otito Prototyping na Manufacturing, CNC Rapid Prototyping, Otito Prototyping, CNC Prototyping, Fast Prototyping,